राणाकालीन दस्तावेजको उचित संरक्षण हुन सकेन ! – Online Kendra – Nepal no.1 News portal
राणाकालीन दस्तावेजको उचित संरक्षण हुन सकेन !
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०७:०७ July 22, 2021 NewsRoom
साउन ७, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीमा रहेका राणाकालीन दस्तावेजको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । निजामती थमौती, सैनिक कमान्डरीसम्बन्धी मिसल, सेनासम्बन्धी पुराना इस्तिहारलगायतका सामग्री किताबखानामा छ । २०७२ सालको भूकम्पले हरिहर भवन भत्किएपछि त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजलाई त्यही परिसरमा प्रिफ्याबको संरचनाभित्र राखिएका छन् । तिनलाई सुरक्षित राख्न उपचार विधि प्रयोग गरिएको छैन ।
विसं २००२ सम्मको निजामती थमौती कर्मचारी सिटरोल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । त्यसपछिका सिटरोल किताबखानामा राखिएका छन् । राणाकालीन निजामती थमौती राखिएको कोठामा ०१६र१७ सालसम्मका सिटरोल राखिएका छन् । २००२ सालभन्दा अगाडिका कतिपय निजामती थमौतीका ढड्डा पनि किताबखानामा छ ।
सो कोठामा पुराना किताबका साथै स्थान अभावका कारण कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणका खाम पनि राखिएका छन् । त्यो बेलाका सैनिकका सिटरोल, सेनासम्बन्धी विभिन्न इस्तिहार, राणाकालीन कर्मचारीहरूका तस्बिर आदि पनि फेला पर्छ । केही वर्षअघि तिनलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा ल्याउने लगभग तयारी भइसकेको थियो तर किताबखानाका तत्कालीन महानिर्देशकको सरुवा भएपछि सो योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । केही वर्षअघि एक जना अन्वेषकले हरेक दिन किताबखानामा पुगेर सात दशकअघिका ती सिटरोललाई सिलसिलेवार रूपमा राखिदिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
शिक्षा/स्वास्थ्य, समाजराणाकालीन दस्तावेजको उचित संरक्षण हुन सकेन !
योजनाविपरित केही पालिका र जिल्लामा पहुँचका भरमा कोरोना खोप !
केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै